IHub yasekhaya kaGoogle kukuzivelela kweMini neKhaya, kodwa ngescreen | I-Androidsis
IHub yasekhaya kaGoogle yimveliso entsha evela kwi-G enkulu efuna ukuthatha inyathelo lokuya phambili yindalo yeKhaya likaGoogle okanye iMini yasekhaya yakwaGoogle. Olu luvo oluphambili kwiHub yasekhaya kaGoogle, okanye yintoni ebonakala ngathi ithebhulethi ibekwe kwisiseko ukuze ukwazi ukunxibelelana nelizwi lakho.
IHub yasekhaya kaGoogle yeyona ibonisiweyo kulawulo lwe Zonke izixhobo ezixhumeneyo onazo ekhayeni lakho. Indlwane yenye yamawaka eemveliso eziza kumiliselwa kwaye zininzi ezikhoyo namhlanje ukuze ulawule.
Isixhobo esinye sokulawula wonke umntu
Ngehabhu lasekhaya likaGoogle sinokuba nezinye iindaba ze Iifoto zikaGoogle: Iialbham eziBukhoma. Ngaphandle kwento yokuba ubukrelekrele bokufota kwiifoto buya kujonga ezona foto zilungileyo zikubonisa ngaphambi kwescreen sobungakanani beGoogle Home Hub.
Nangona eyona nto inomdla ngale hub intsha yile nxibelelana "naye" ngoMncedisi kaGoogle. Yenzelwe ngokuchanekileyo ukuze ilizwi lakho libe lijelo lokunxibelelana kwaye, njengoko kusenzeka kwiifowuni nakwizixhobo zangaphambili, nakwisikrini esikumgangatho ophakathi, isibonisa iividiyo, iwebhusayithi kunye nayo yonke into esiyiqhelileyo xa sikhangela kuGoogle.
UGoogle wongeza enye imveliso eyenzelwe ikhaya kwaye ejoyina iKhaya likaGoogle kunye Mini yasekhaya yeGoogle. Ngokusisiseko le Hub yasekhaya inomtsalane omkhulu ngumxholo wesikrini. Njengoko i-G enkulu ibonakalisile kumzekelo, sinako ukuxolela isonka ngelixa silandela isifundo sevidiyo esivela kuYouTube; konke ngaphandle kokuchukumisa isikrini sisebenzisa ilizwi lethu ukunxibelelana neHub yasekhaya.
IHub yasekhaya kaGoogle iyafumaneka uku-oda kwangaphambili kwe- $ 149 ngokubhaliswa kweNkulumbuso yeNyanga yeNyanga ye-6. Ukuba ujonge ukuthenga iKhaya likaGoogle, ngoku ukuthengwa kuya ngqo kwiHub yasekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Amacwecwe e-Android » IHub yasekhaya kuGoogle, okanye uMncedisi kaGoogle ekhayeni lakho ungene kwithebhulethi